Wararkii ugu dambeeyay ee diyaargaroowga doorashada madaxweynaha Soomaaliya
Magaalada Muqdisho ayaa weyn looga dareemayaa ololaha doorashada madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya, taas oo lagu wado in ay ka dhacdo teendhada Afisyooni ee maalinta Axadda ah ee 15-ka bishan.
Sida ku cad jadwalka dhameystirka doorashada ee kasoo baxay guddiga isku dhafka ah ee labada aqal ee Baarlamaanka, maanta iyo berri ayaa ah laba maalmood oo loo diyaargaroobayo maalinta doorashada madaxweynaha.
Khamiistii shalay, waxaa soo gabagaboobay hadal-jeedinta musharaxiinta madaxweynaha oo socotay labadii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana doorashadan isu diiwaangeliyay 39 musharrax oo ay ka mid yihiin madaxweynaha hadda xilka haya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, madaxweyneyaashii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Ra'isul Wasasaarihii hore Xasan Cali Khayre, madaxweynha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, xildhibaanno iyo siyaasiyiin kale.
Musharaxiinta madaxweynaha ayaa sidoo kale kulammo gooni-gooni ah la leh xildhibaannada iyo madaxda dowlada goboleedyada.
Wararka doorashada madaxweynaha wixii kusoo kordha halkan ayaad kala socon doontaan ee nagu soo noqo.